घरमा ईन्टरनेट दर खोज्दै हुनुहुन्छ? यी प्रस्तावहरूको साथ तपाईंको दरमा बचत गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
नेभिगेट र बचत गर्न इन्टरनेट दरहरू
धेरै समय अघि, इन्टरनेट भाँडामा लिँदा विकल्पहरू थोरै थिए। बिस्तारै ADSL जडानहरूले हामीलाई वेबपृष्ठमा पहुँच गर्न कोशिस गर्दै व्याकुल बनायो। भाग्यवस, इन्टरनेट नेटवर्क सुधार भएको छ र अब १ जीबी सम्मको गतिमा पुग्छ। तर सामान्यको रूपमा, अधिक विकल्पहरू मध्येबाट छनौट गर्न, यो अधिक जटिल छ कि विकल्प खोज्नको लागि जुन हामी वास्तवमै चाहान्छौं र हामीलाई बचत गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसकारण, आज हामी घरमा सर्फ गर्न एकै साथ सबै भन्दा राम्रो इन्टरनेट दरहरू बीच तुलना गर्न जाँदैछौं र एकै समयमा बचत गर्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो प्रस्ताव: होम फाइबर M० एमबी सुन्तला
सबैभन्दा सस्तो भाडा: केवल फिनेटवर्क फाइबर
सब भन्दा पूर्ण दर: 100Mb फाइबर अधिक मोबाइल
उत्तम इन्टरनेट दर: योइगोको 100Mb फाइबर
अब जब हामी जान्दछौं कि घरमा स्थिर, सस्तो र स्थायित्व बिना इन्टरनेट भाँडामा लिइएका विकल्पहरू वास्तवमै अवस्थित छन्, यो यस विषयमा जान र अपरेटरहरूले प्रस्ताव गरेको प्रत्येक दरको गहिराईमा विश्लेषण गर्ने समय हो। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?
Movistar 300Mb Movistar जडान गर्दछ 300Mbps € 38.११ / महिना
एकल लोई फाइबर 100Mbps € 29.95.११ / महिना
भोडाफोन फाइबर १२० MB 300Mbps € 30.99.११ / महिना
होम फाइबर M० एमबी सुन्तला 100Mbps € 30.95.११ / महिना
MásMóvil बाट 100Mb फाइबर 100Mbps € 29.99.११ / महिना
योइगोको 100Mb फाइबर 100Mbps € 32.११ / महिना
Jazztel कलको साथ 100Mb फाइबर 100Mbps € / महिना
1 लोइ, यस भोडाफोन OMV मा विकल्प
2 MásMóvil र यसको सस्तो फाइबर दर
3 सुन्तला घर Fibra दरहरु
4 ज्याज्टेल र यसको नयाँ फाइबर दरहरू
5 १२० Mb भोडाफोनको साथ नेभिगेट गर्न
6 योओइगोको साथ केवल १००Mb सममित फाइबर
लोइ, यस भोडाफोन OMV मा विकल्प
हाल सम्म, लोई उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक थियो यदि हामी राम्रो कभरेजको साथ सस्तो इन्टरनेट भाँडा लिन चाहन्छौं। यो भोडाफोन नेटवर्क अन्तर्गत काम गर्दछ, यसैले तपाईं एक धेरै लुकेको ठाउँमा बस्नुहुन्न भने, तपाईं समस्या बिना फाइबर कभरेजबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। मूल्य प्रति महिना २ 29,95 यूरो मात्र हो, बजारमा सस्तो फाइबर दर हो।
र यदि मूल्य थोरै फाइदा लाग्यो भने अझै अझै छ। यस दरसँग स्थायित्व छैन, त्यसैले हामी कुनै पनि समयमा दंड वा जरिवानाको डर बिना कम गर्न वा परिवर्तन गर्न सक्दछौं। र तिनिहरूले हामीलाई राउटरको स्थापना वा forणको लागि शुल्क लिने छैनन्। यदि लोई फाइबर दर को विवरण पढेर तपाईं घर मा आफ्नो जडान हुन प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं संग बाहेक केहि छैन तपाईंको सेवा अनुबन्ध गर्न यो लिंक पहुँच गर्नुहोस्.
MásMóvil र यसको सस्तो फाइबर दर
पहेलो अपरेटरले रेट मार्केटमा क्रान्ति ल्याउन शुरू भयो। र यस समयमा, यो सही ट्र्याकमा देखिन्छ किनकि यसको फाइबर र एडीएसएल प्रस्तावहरू सस्तोमा छन्। केवल month२.29,99 प्रति महिना मात्र हामी ल्यान्डलाइनबाट M० मेगाबाई फाइबर र असीमित कलहरूको आनन्द लिन सक्दछौं।
यो सस्तो मासिक शुल्कमा हामीले केहि थप गर्नुपर्दैन किनकि स्थापना र राउटर नयाँ रेजिष्ट्रेसनहरूमा स्वतन्त्र छन्। तर यदि हामीलाई थाहा छ कि यसमा १२ महिनाको स्थायित्व छ, त्यसैले यदि हामी यस अवधिको अन्त्य हुनु अघि दर परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने हामीले जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई द्रुत गर्न हामी तपाईंलाई यो लिंक छोडदछौं.
सुन्तला घर Fibra दरहरु
सुन्तला क्याटलगको माध्यमबाट हेर्दै, हामीले घरमा ईन्टरनेट भाँडामा राख्न होम फाइबर दरहरू फेला पार्‍यौं र अरू केहि पनि छैन। यी दरहरू ती व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त छन् जसले आफ्नो मोबाइल दर घरमा तिनीहरूको जडानबाट टाढा राख्नुपर्दछ र सस्तो ल्यान्डलाइन पनि खोज्दै हुनुहुन्छ। विशेष रूपमा, यसले ल्यान्डलाइनमा असीमित कलको साथै मोबाइलहरू कल गर्न १००० मिनेट समावेश गर्दछ। र कुन मूल्यमा? € 1000 एक महिना सबै चीजको लागि।
त्यसोभए यदि हामी सुन्तला कभरेजको साथ फाइबर चाहन्छौं भने, यसको बारेमा सोच्नु राम्रो हुँदैन। यहाँबाट चाँडै र सजीलो गरी यो दर भाडामा लिनुहोस्.
ज्याज्टेल र यसको नयाँ फाइबर दरहरू
यसको छवि धुने पछि, ज्याज्टेलले हामीले सम्झौता गर्न सक्ने फाइबर दरहरू परिवर्तन गर्न प्रस्ताव राख्छ। सबै भन्दा माथि, यदि सुन्तला दरले हामीलाई विश्वास दिलाउँदैन, किनकि तिनीहरू समान कभरेज नेटवर्क अन्तर्गत काम गर्छन्। यदि हामीले इन्टरनेट-मात्र दर सिफारिस गर्नु पर्छ भने। ज्याज्टेल, उत्तम मध्ये एक सिमेट्रिक फाइबर गति र कलको १०० मेगाबाइटको दर हुनेछ। हामी हाम्रो दर बढाउने डर बिना ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्न सक्छौं, किनकि यसले कुनै पनि समय र अपरेटरमा असीमित कलहरू समावेश गर्दछ।
तपाईंको मासिक शुल्क प्रति महिना २..28,95। छ, तर अहिले हामी भाग्यमा छौं। दिमागमा राख्नुपर्ने केही कुरा यदि हामी घरमै हाम्रो इन्टरनेट जडान परिवर्तन गर्ने सोचमा छौं। अधिक जानकारी अनुरोध गर्न वा यसको कुनै एक दरमा सम्झौता गर्नको लागि, तपाईंले यो लिंक पहुँच गर्नु बाहेक अरू केहि गर्नुपर्दैन.
१२० Mb भोडाफोनको साथ नेभिगेट गर्न
यदि हामी कभरेज समस्याबाट बच्न सामान्य अपरेटरहरूसँग इन्टरनेट सम्झौता गर्न चाहन्छौं भने, हामी भोडाफोन र यसका ओएनओ फाइबरको बारेमा बिर्सनुहुन्न। हामीसँग छनौट गर्न धेरै दरहरू छन्, तर यदि हामी एकै समयमा राम्रो इन्टरनेट गतिमा धेरै खर्च गर्न खोज्दैनौं भने उत्तम दर निस्सन्देह फाइबर ओनो १२० MB.
सब भन्दा राम्रो कुरा यो दर को मासिक शुल्क मा २ 24 महिना को लागी प्रस्ताव छ, जसमा हामी € pay मात्र तिर्नेछौं, २०० भन्दा बढि युरो बचत गरेर। यो प्रस्ताव नछुटाउनको लागि, तपाईंले गर्नुपर्दछ अहिले नै यो भाँडामा लि access्क पहुँच गर्नुहोस्.
योओइगोको साथ केवल १००Mb सममित फाइबर
योयोगो फाइबर रेट बजारमा प्रवेश गरेको हुनाले, आर्थिक विकल्पहरू जब यो भाँडामा आउँदछ धेरै गुणा भयो। प्रस्तावित तीन दरहरु मध्ये, हामी हामी मध्यवर्तीलाई 300Mb को साथ सिफारिस गर्दछौं, विशेष गरी यसको मूल्य र गति को लागी।
हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ कि यो दर १२ महिनाको रहनु छ र यदि हामीले यसको पालना गरेनौं भने अधिकतम जरिवाना १०० यूरो छ। र चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने दर्ता र स्थापना नि: शुल्क छ र तपाईंसँग यी अवधारणाहरूको लागि चलानीमा शुल्क लाग्नेछैन। यदि तपाईं यस दरमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई चाँडै यो लिंकबाट अनलाइन भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ.
जैसा कि तपाईंले देख्नु भएको छ, त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् हामीसँग जब यो घरको लागि इन्टरनेट भाँडा लिन आउँछ। र सबै भन्दा माथि, धेरै विकल्पहरू जसले हामीलाई बचत गर्न अनुमति दिन्छ। अब तपाईंलाई बजारमा सब भन्दा राम्रो हालको प्रस्तावहरू थाहा छ इन्टरनेट दर, केवल सबैभन्दा कठिन बाँकी। कुन सेवा भाँडामा छान्नुहोस्। यदि तपाईं अझै निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं भ्रमणको सम्भावना छ रोम्स तुलनात्मक र तपाईलाई चाहिएको फेला पार्नुहोस्।